Home Wararka Imaanshaha Xuud ee Muqdisho ma xaqiijin karaa kursiga Fahad Yasin?
Jeneral Abuukar Xaaji Warsame (Xuud) oo si weyn uga soo horjeeday HirShabelle ayaa maanta la keenay magaalada caasimada ah ee Muqdisho, isaga oo ogolaaday inuu wad-hadal toos ah la galo dowaldda federaalka ah ee Soomaaliya.
Xuud oo diyaarad gaar ah ay kasoo qaaday Beledweyne ayaa waxaa la socday taliyaha ciidamada Lugta General Biixi oo hormuud ka ah dadaallada socda ee lagu qaboojinayo xiisadda ka aloolsan magaaladaasi, si loogu qabto doorashada Golaha Shacabka Somalia.
Generalka oo muddo ku sugnaa duleedka magaalada Beledweyen ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey caasimada, waxaana garoonka ugu hortegy ciidamo iyo saraakiil loo diyaariyey inay qayb ka noqdaan soo dhoweyntiisa, taas oo dhalisay hadal heyn xoogan.
Abuukar Xaaji Warsame (Xuud) oo horey uga hadlay safarkiisa Muqdisho ayaa xusay inuu kulan gaar ah la qaadan doono Farmaajo, maadaama Villa Soomaaliya ay haatan dadaal xoogleh haatan galineyso xiisadda Beledweyne, wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey inay guuleysan doonaan wada-hadallada socda ee xalka loogu raadinyo tabashada reer Hiiraan.
“Xalka Hiiraan haddaan madaxweynaha isku tegno waxaan qiyaasaayaa 70% inay xalismi doonto,” ayuu yiri Jeneral Xuud.
Dhinaca kale wuxuu beeniyey in illaa & hadda uu kulan la yeeshay madaxda HirShabelle ee ku sugan Beledweyne, sida madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Yuusuf Dabageed. Xuud ayaa sheegay inuu haatan wadahadalku kula jiro dowladda federaalka Soomaaliya.
“Kacdoon ayaa nala yiraahdaa HirShabelle wax la yiraahdo shir lama yeelanin annaga,” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Arrimahan ayaa kusoo aadayo, iyada oo maalin ka hor taliyaha ciidamada lugta oo ay aad isugu dhow yihiin Farmaajo uu gaaray Beledweyne, isaga oo halkaas ka bilaabay kulamo xal raadin ah, si magaaladaasi loogu qabto doorashada Golaha Shacabka ee Soomaaliya.
Previous articleSomaliland independence depends on dialogue, UK says
Next article[Puntland] Cabashada musharraxiinta u taagan aqalka hoose oo aad iskusoo taraysa
Is-beddel cusub oo ka soo ifbaxay tabta siyaasadda ee FARMAAJO iyo...